Kungani ukuphuza amazambane, ukumba amazambane noma amazambane nezilimo eziyizigaxa
Amaphupho asho ukuthini ngamazambane? Ukuchazwa kwamaphupho ngamazambane
Ezincwadini ezahlukene zokuphupha, ukuchazwa kwephupho ngamazambane kuzoba okuhlukile, kepha bonke bayavuma ukuthi amaphupho amazambane, okokuqala, ahlobene nokuzuza ngokwethembeka noma inzuzo evela emsebenzini oqotho.
Kunamaphupho amaningana ayisisekelo mayelana namazambane
Sizohlukana ngalunye ngokwehlukana, ngoba ngezinye izikhathi ngisho namaphupho amabili afanayo afana nawo angaba ahluke ngokuphelele. Futhi-ke, uma:
Uma nje uphuphe amazambane ahlezi etafuleni, ebhasikisini, ezitsheni noma kwezinye izindawo, kusho ukuthi kulindeleke ukuthi ushintshe. Ngaphezu kwalokho, uhlobo luni lwempahla, imibono ihlukanisa, kodwa iningi lisabheka lezo zinguquko ezihle.
Iphupho lokumba amazambane - umsebenzi wakho nokubekezela kuzoletha umphumela omuhle okulinde isikhathi eside, kodwa lokhu kuzomele kusebenze kanzima. Cishe, okwamanje, umatasa emsebenzini, mhlawumbe ulindele umphumela othile. Khumbula ukuthi ngekusasa lakho kubalulekile ukulwa, ukukhombisa ukubekezela nokubekezela. Futhi, iphupho lingasho ukusondelana obuseduze nomngane wakho owake wafuna.
Ubona amazambane amakhulu ephusheni - esikhathini esizayo ngokuqinisekile ulindele impumelelo nenzuzo enhle. Amazambane amakhulu ephusheni kusho inhlanhla, okuzofika kuwe emva kwesikhashana. Lokhu kungenzeka ukuthi akuhlobene nezezinto ezibonakalayo. Mhlawumbe uzothola okuthile okusha, isibonelo, uzothola ukuzilibazisa okuzoba umsebenzi wakho ozithandayo esikhathini esizayo, noma uzohlela ibhizinisi.
Iphupho lamazambane amancane - ezintweni eziseduze ezizayo ngeke zikusebenzele. Kungakhathaliseki ukuthi banquma amaholo abo, noma balahlekelwa amaphrimiyamu abo. Kungabandakanya nanoma yiziphi izindleko ezengeziwe, isibonelo, ukulungisa imoto noma indlu.
Uyabona ezilimo eziyizilimo eziyizigaxa zezambane - njengalokhu kwenzeka nge-p.1 kulindeleke ukuthi ushintshe. Kodwa-ke, lapha sinezingqondo ezinzulu izinguquko ezijulile, futhi akuzona njalo okuhle. Isibonelo, ukuthuthela kwelinye idolobha, ukushintsha imisebenzi, imishado, uthando noma ukulahlekelwa imali, ukulahlekelwa yikhasino. Konke okungathinta kakhulu impilo yakho esikhathini esizayo.
Ukudla amazambane ephusheni - uzothola izinzuzo ezibonakalayo ezinsukwini ezimbalwa noma emasontweni ambalwa. Inzuzo ngeke ibe mkhulu kakhulu, ingafaniswa, ngokuvamile ngeholo lakho elivamile. Lokhu akusho ukuthi imali izokwehla ekhanda lakho, cishe, uzothola uhlobo oluthile lomsebenzi ophansi noma uthole ibhonasi yomsebenzi wakho.
Sibone amazambane abolile - kufanele silindele izinkinga zempilo. Ngokuvamile zihlobene nesistimu ye-musculoskeletal. Kungase kube nosizi noma ubuhlungu entanyeni, emuva, okhalweni, izinkinga ezihlangene. Sincoma ukuthi wenze prophylaxis yalezi zifo, ubone udokotela. Uma ungayinaki le ncazelo, ungafaka lonke iqembu lezi zifo.
Ukuphupha mayelana namazambane okupheka kusho ukuthi okwamanje usebenza okuthile okuzokuzuzisa esikhathini esizayo. Kungaba iphrojekthi emsebenzini, okuzokhokha kuyo, noma mhlawumbe ukulungiselela umshado nomuntu othandekayo.
Ekuphetheni, siyaqaphela ukuthi amaphupho amazambane ezimweni eziningi kufanele abhekiswe ekutholeni izinzuzo noma izinto zokuziphatha. Noma kunjalo, amazambane ngokwawo kusho umsebenzi okufanele usetshenziswe ukuze kufinyelelwe imigomo. Kwamancane amacala achaziwe ngenhla, lokhu kungasho zonke izinhlobo zobunzima ozobhekana nazo. Kodwa ungavumi ukwesaba, kungcono ukuhlaziya ngokucophelela ukuthi kungaba yiziphi izinkinga futhi ungabuyiseli lolu daba ekulahlekelweni nasezempilo.
Isitimela savuka - ukuthi yini ongayilindela
Ukunakekelwa kahle kwe-eyelashes
U-Alla Berger no-Alexei Vorobyov: umbhangqwana owedlule we-show "Bach-4"
Pizza nge utamatisi kanye namasoseji
UKhisimusi wamaKatolika 2015: ukuhalalisela ngokusuka enhliziyweni evesini nasenhlakeni
I-garlic ku-juice le-beet
UCarla Bruni: Biography
I-Salicylic Acid Acne
"Ama-shade ama-50 we-gray" aya esikrinini esikhulu
I-recipe ye-Spring: ikhekhe lezithelo ze-citrus namajikijolo nesikhumba